Showing १५१-१६० of ९६८ items.
१,००६ पटक पढिएको
९६५ पटक पढिएको
राजनीतिको निर्वस्त्र सत्य
राजेन्द्र रिमाल पञ्चायतमा हामीलाई भनियो– यो देश नबनेको पञ्चायती व्यवस्थाले गर्दा हो, हाम्रो गरिबीको कारण र समृद्धिको बाधक भनेको राजतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली हो । त्यसैले यसलाई हटाउने दिशातर्फ जीवन उत्सर्ग गर्नुपर्छ । सिक्ने र जान्ने उमेर भएको त्यसबेला हामीलाई पढाइयो– ‘सङ्घर्षमा नहिँडे, सामन्तलाई नगिँडे, आउँदैन है जनवाद छमछम नाचेर ।’ मैले ०३६ सालको विद्रोह देखेपछि राजनीतिको ‘र’ बारे बुभ्mन थालेको हो । उबेला हाम्रोतिर अखिलको पाँचौं र फेडरेसनको खुब चकचकी थियो । अनि प्रहरी प्रशासनको आडमा मण्डलेहरू पनि बेलाबेला फाइँफुइँ गर्थे । त्यहीबेला नै हो देशको ठूलो
नाफाखोरीबाट डामिएका उपभोक्ताहरू
उद्धव श्रेष्ठ ‘मकै’ उपभोक्ता सार्वभौम हुन्, त्यसैले उसले कुनै सामग्री रोजेर इच्छाले खरिद गर्न पाउने अधिकार छ । उपभोक्ता व्यापारीहरूका लागि भगवान् हुन्, व्यापार सञ्चालन गराउने आधार हुन् । उपभोक्ता बिना बजार र व्यापार सबै रित्तो हुन्छ । उनीहरूबाट जतिसक्दो मुनाफा लिनु पर्छ । जति सक्दो ठग्नु पर्छ भन्ने मान्यता नराखी व्यापारीहरूले सम्मान गर्न पनि सिक्नु पर्दछ । हुन त सबै व्यापारीहरू पनि उपभोक्ता हुन् । उनीहरू आफै पनि अरू व्यापारीहरूबाट ठगाइ भोगिरहेका हुन्छन् । उपभोक्ताहरूका हितमा सर्व प्रथम सन् १९६२ मार्चमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले काङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्दै भनेका थ
नेपालमा कोभिड–१९ र अर्थतन्त्रमा प्रभाव
पारस काङ्माङ राई विद्यमान विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को धक्का लागिरहेको छ । विश्व मानव समुदायमा प्रभाव पारिरहेको कोरोना भाइरस नेपाल नछिर्दैदेखि अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गहिरो दुष्परिणाम देखिन शुरु भइसकेको थियो । जसका प्रभाव नेपाली भान्छासम्मै पर्ने सङ्केत देखिएको थियो । वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा त्यो प्रभाव दिनदिनै बढिरहेको छ भन्ने कुरालाई ९ हजारमाथि सङ्क्रमित भेटिनुले पनि पुष्टि गरिदिएको छ । यसभन्दा अगाडि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले विश्वमा महामारी, भोकमारी र अनिकाल आउन सक्ने भनी चेतावनीसमेत दिएको थियो । विश्वका धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरूमा यसको प्रभाव घनीभूत देखिएपछि गरिब
बालबालिकाहरुको बदलिएको दिनचर्यामा शैक्षिक उपलब्धिको खोजी
शेखर ढकाल कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण समाजको सोच, कार्यशैली र दिनचर्या फेरिएको छ । सबै तह, तप्का र पेशाकर्र्ममा गम्भीर प्रभाव परेको छ । जिन्दगी कोरोनाअघि र पछि गरी दुई भागमा बाँडिएको छ ।उल्लेखित पृष्ठभूमिमा हाम्रा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूको सोच र कार्यशैलीमा पनि निकै परिवर्तन आएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा स्थापित निरन्तरता पनि क्रमभङ्ग भएको छ । र यो क्रम क्रमभङ्गतासँगै केही नवनीतम सिकाइ, फरक शिक्षण शैली र चुनौतीहरू एकसाथ देखापरेका छन् । यसका लागि हाम्रा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक मानसिक, व्यावहारिक तथा प्राविधिक रूपमा कति तयार छन् ? यसबारे सोधीखोजी,
प्रकाशित मितिः असार ८, २०७७
एलिना मगर विश्वभर नै महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) ले हामी सबैलाई आक्रान्त बनाएको छ । यसका कारण हाम्रो दैनिक जीवन असहज भएको छ । मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभएर अर्थतन्त्रमा नै हलचल ल्याएको छ । विभिन्न रिसर्चका अनुसार यो रोग निर्मूल हुनेमा द्विविधा छ । यसैले अब हामी यसैसँग लडेर दैनिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिडले सबै व्यावसायिक क्षेत्रलाई असर पारेको छ । त्यसमध्ये पनि पर्यटनको क्षेत्रमा यसले दीर्घकालीन असर पार्नेछ । जसमध्ये पनि बास बसाउने होटल वा होम–स्टे व्यवसाय निकै मारमा परेका छन् । सरकारले वर्गीकरण गरेको कोरोनाको उच्च जोखिमपूर्ण